BackGround History » Technological University (Hinthata)
History and Year of Establishment
Technical High School (Hinthata) was opened at No.202 Block, Tar Ngar Sal, South Quarter, Hinthata on 1st August, 1977. Then, it was promoted asaGovernment Technical Institute on 20th December, 1982. In 1999 August 12, it was promoted as Government Technological College. And then, it has been promoted to Technological University is Dr.Soe Moe Htun (Associate Professor, Ph.D,EC).
စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း(ဟင်္သာတ)သည် ၁၉၇၇ခု၊ ဩဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့တွင် ဟင်္သာတမြို့တာငါးဆယ်တောင် ရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၀၂)တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပါသည်။ ၂၀-၁၂-၁၉၈၂တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ ၁၂-၈-၁၉၉၉တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး (၂၀-၁-၂၀၀၇)နေ့တွင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ယခုခေတ္တကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ဒေါက်တာစိုးမိုးထွန်း ဒုတိယပါမောက္ခ Ph.D,(EC)မှ တာ၀န်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
Technological University (Hinthata) is located aside the Pathein-Hinthata railway,at the Southern part of Hinthata, Hinthata District, Ayeyarwaddy Division. The Area of the University is about 64.64 acres.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)သည်ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၏ တောင်ဘက် နတ်မော် ကျေးရွာအနီး ဟင်္သာတ-ပုသိမ်မီးရထားလမ်းဘေးတွင်တည်ရှိပါသည်။ အကျယ်အ၀န်းမှာ (၆၄.၆၄)ဧက ကျယ်၀န်းပါသည်။